दाईजो कै लागि छोरीलाई यती सम्म गरिदो रहेछ ! धुमधामले बिहे गरेर गएकी बिष्णु २७ दिन मै .. – Life Nepali
दाईजो कै लागि छोरीलाई यती सम्म गरिदो रहेछ ! धुमधामले बिहे गरेर गएकी बिष्णु २७ दिन मै ..
काठमाडौ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ’त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्त’ब्ध बनाएको छ । आमाको आँखा ओभाएका छैनन् । वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको र’हस्यम मृ’त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । ** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बर्माचोकदेखि करिब दुई सय मिटर भित्र घर भएका ३० वर्षियप्रदिप भट्टराईसँग उनको विवाह भएको थियो । माइती पक्षले घ’टना र’हस्यमय भएको बताएका छन् । माइतीले दाइजोका कारण छोरीको मृ’त्यु भएको आशंका माइतीले गरेका छन् । विवाह भएको केही दिनमै फोनमा विष्णुले आमा ज्वाईको औँठी र सिक्री सानो भएछ भनेर गु’नासो गरेकी थिइन् ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
उनले दुरान फर्काउन आउँदा अलिकति सुन थपेर ठूलो बनाइदिउँ है भनेर पनि भनेकी थिइन् । तर दुरान फर्काउन नपाउँदै छोरीको मृ’त्युको खबर सुन्नुपर्दा माइती पक्ष स्तब्ध भएको छ । दुई पक्षले नै सल्लाह गरेर विवाह भएको थियो । भान्जीले छोरीको विवाह गरिदिनु भनेपछि आफुहरुले सल्लाह गरेर विवाह गराएको आमाको भनाई छ। उनीहरुको विवाह रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्वर–११ मद्रानी घाईघाटकी पार्वती गौतमले गराइदिएकी थिइन् । गौतम विष्णुको आमाको भान्जी हुन् ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
Previous बाढी आएपछि ज्यान जोगाउन मेलम्चीकाे होटलमा फसेका २ जनालाई सेनाकाे हेलिकोप्टरबाट उद्दार…
Next भिषण बाढी : सिन्धुपाल्चोकमा ७ जनाको मृ’त्यु , कैयौं वेपत्ता, खोज तथा उद्धार जारी